पूरा नहुँदै चर्कियो टिकुलियाघाट पुल- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
पूरा नहुँदै चर्कियो टिकुलियाघाट पुल
माघ २५, २०७६ शिव पुरी
रौतहट — गौर नगरपालिका–४ स्थित टिकुलिया घाटमा बकैया नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको पश्चिमतिरको दुईटा गडर (पुलको तल्लो भाग) चर्किएको छ । गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएकाले गडर चर्किएको सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी मदनमोहन सिंहले बताए ।
पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कस्ट्रक्सनले पाएको थियो । तर, समयमै काम नसकेपछि निर्माण अलपत्र छ । कन्स्ट्रक्सनले पछिल्लो समय कामै छाडेर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सडक डिभिजनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘ठेक्काको म्यादसमेत थप भएको छैन, काम त्यतिकै अलपत्र छाडेर निर्माणकर्ता बसेको छ,’ सिंहले भने, ‘भुक्तानी नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । काम भने गुणस्तरहीन छ ।’ पप्पुले कतिको बिल भुक्तानी माग गरेको भन्ने सडक डिभिजनले खुलाएको छैन । ठेकेदारले पछिल्लो समयमा कछुवा गतिमा गरेको काम गुणस्तरहीन भएको उनको दाबी छ । म्याद थप र चर्केको भागको पुनः निर्माण गर्नेबारे सडकले ठेकेदारलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । निवेदन र अन्य कागजमा हस्ताक्षर नगरेसम्म म्याद थप नहुने सिंहले जनाए ।
सदरमुकाम गौर र बकैया जोड्ने निर्माणाधीन पुलको काम २०७४ माघ २९ मा सक्नु पर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ कातिक २९ गते पुलको शिलान्यास गरेका थिए । तत्कालीन ंसडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाबाट २० करोड ७२ लाखको लागतमा पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान भएको थियो । २२५ मिटर लम्बाइ र ७.२ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुल बनाउनुपर्ने सर्त थियो । तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो । २०७१ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले पटकपटक काम गर्ने र छोड्ने गर्दै आएको छ । गएको वैशाख र जेठमा कछुवा गतिमा काम गरे पनि अहिले बन्द भएको इन्जिनियर सिंहले बताए । त्यतिखेर बिमको काम भएको थियो । पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै नआएको उनको भनाइ छ । टिकुलिया घाटमा पुल नभएकै कारण स्थानीयले डुंगाको भर नदी वारपार गर्दै आएका छन् । बन्जरहा, औरैया, मठिया, जोकहा, वैरिया, अकोलवा, रामपुर खापलगायत दर्जनौं गाउँका बासिन्दालाई सदरमुकाम गौर आउन जोखिमपूर्ण डुंगा यात्रा गर्नुपर्छ ।
गत भदौ ९ गते यही अधुरो पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । २४ जनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए । घटनापछि निर्माण सक्न चौतर्फी दबाबपछि कम्पनीले काम थाल्ने जनाएको थियो । तर, काम छाडेर मुद्दा दायर गरेपछि पुल बन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०९:४२
माघ २५, २०७६ अतुल मिश्र
छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी भएको निमोनिया उत्पन्न गराउने ‘नोवल कोरोना भाइरस’ संक्रमणको प्रकोप र जोखिम दिनदिनै बढ्दो छ । निमोनियालगायत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या निम्त्याउने भाइरसका कारण विश्वभर आतंक सिर्जना भएको छ ।
विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा पुगिसकेको भाइरस संक्रमण रोक्न विश्वव्यापी रणनीति आवश्यक छ । ठोस भ्याक्सिन वा औषधि पत्ता लागिनसकेको भाइरस संक्रमण रोक्ने एउटै उपाय, संक्रमित व्यक्ति र स्वस्थ व्यक्तिबीचमा सम्पर्क हुन नदिनु हो । नेपालमा हालसम्म चीनबाट फर्किएका एक विद्यार्थीमा मात्र भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यद्यपि प्रकाशमा नआएका अन्य संक्रमित पनि हुन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिइरहेका छन् ।
‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्टअनुसार नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षण नदेखिएका व्यक्ति पनि संक्रमित हुन सक्छन् र अन्य व्यक्तिमा फैलाउन सक्छन् । उक्त अनुसन्धानअनुसार भाइरस पीडित नदेखिने व्यक्तिबाट पनि संक्रमण फैलने खतरा हुन्छ ।
‘एक संक्रमितलाई उचित व्यवस्थापन नगरिए त्यसबाट सयौं हुँदै हजारौं र संक्रमणको एउटा अन्तहीन शृंखला नै निर्माण हुन्छ,’ वरिष्ठ श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा.रमेश चोखानी बताउँछन्, ‘यही कारणले पश्चिमा राष्ट्रले चीनबाट फर्किएका वा बिरामीको सम्पर्कमा रहेकालाई अनिवार्य रूपमा दुई साता क्वारेनटाइनमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।’ कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दुई दिनमै जटिल अवस्थामा आउन सक्ने र त्यसले ज्यानसमेत जान सक्ने भएकाले प्रभावकारी खोप र उपचार विधि पत्ता नलागेसम्म रोकथामको माध्यम अपनाउनु नै बुद्घिमानी हुने उनी सुझाउँछन् ।
शंकास्पद व्यक्तिलाई ‘आइसोलेसन’ मा राखेर स्वास्थ्यकर्मीले उपयुक्त सुरक्षाका उपाय र उपकरण लगाएर उपचार गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।
आइसोलेसन (पृथकीकरण) र क्वारेन्टाइन संक्रामक रोगको प्रसार र विस्तार कम गर्न जनस्वास्थ्यअन्तर्गत अपनाइने एउटा प्रक्रिया हो । आइसोलेसनअन्तर्गत केही खास रोगको प्रसार र विस्तार कम गर्न संक्रमित व्यक्तिलाई स्वस्थ व्यक्तिको सम्पर्कभन्दा अलग राखेर सुरक्षा उपकरणले सुसज्जित विशेषज्ञबाट उपचार गरिन्छ ।
क्वारेन्टाइनअन्तर्गत सर्ने रोगको सम्पर्कमा आएका स्वस्थ व्यक्तिलाई छुट्टै राखेर अन्य स्वस्थ व्यक्तिसँग हिमचिम हुन दिइँदैन । त्यस्ता व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएको वा नफैलिएकोबारे हेरिन्छ ।
करिब ५ हजारभन्दा बढी नेपाली चीनमा अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीबाहेक व्यापार, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा त्यहाँ रहने नेपालीको यकिन तथ्यांक छैन । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ठूलो छ । बर्सेनि डेढ लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । ‘हाल चीनलगायत संक्रमण देखिएका ठाउँबाट आउने जोकोही घरमै बसे पनि दुई सातासम्म क्वारेन्टाइनमा बसेजस्तै अलग्गै बस्नु उपयुक्त हुन्छ,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल, टेकुका निर्देशक एवं भाइरोलजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले बताए ।
चीनबाट फर्किएर घरमा रहँदासमेत एउटा छुट्टै राम्रो भेन्टिलेसन भएको कोठामा मास्क लगाएर परिवारका अन्य सदस्यको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने गरी दुई सातासम्म छुट्टै बस्नुपर्ने आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन् । त्यसरी बस्दासमेत बारम्बार साबुनपानीले हात धुनेलगायतका स्वच्छताका सबै उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने उनी सुझाउँछन् । देश फर्किर्एको दुई साताभित्र रुघाखोकी, ज्वरो आदि देखिए तुरुन्तै टेकुलगायतका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो यात्रा इतिहास खुलाउँदै
चिकित्सकीय सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको डा.पाण्डेले औंल्याउँछन् ।
विमानस्थललगायतका क्षेत्रमा ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामीको ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने प्रक्रियामा थप कडाइ हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका सिनियर कन्सलटेन्ट चेस्ट फिजिसियन डा. नवीनप्रकाश शाह भन्छन्, ‘चीनजस्तो हामी १० दिनमा हजार शय्याको अस्पताल बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले संक्रमण भित्रिन नदिनु नै उच्चतम विकल्प हो । यदि संक्रमण पाइए क्वारेनटाइन र आइसोलेसनजस्ता प्रक्रियाबाट अन्य व्यक्तिमा फैलनबाट रोक्ने नै हाम्रो रणनीति हुनुपर्छ ।’
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म एक जनामा मात्र नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जनाएको छ । गत माघ ९ गते एक शंकास्पद व्यक्तिको रगत र र्‍यालको नमुना जाँच गर्दा नोवल कोराना भाइरस पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका अन्य १७ जनाको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिँदा अन्यमा संक्रमण नपाइएको उसको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सम्पादन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिसमेत हाल स्वस्थ भइसकेका छन् । डा. पाण्डेका अनुसार, हालसम्म कोरोना भाइरसले हुने मृत्यु दरलाई विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु पाका उमेर भएका व्यक्तिको भएको देखिन्छ ।
चीनबाट आउनेले संक्रमण फैलाउन सक्छन् ?
आफूखुसी चीनलगायत संक्रमण देखिएका ठाउँबाट फर्किएका नेपाली र अन्य मुलुकका नागरिकबाट नेपालमा संक्रमण फैलन सक्ने उच्च जोखिम रहेको विशेषज्ञले औंल्याएका छन् । चीनबाट सरकारले ल्याउने भनिएका १ सय ८० जना नेपालीलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारी तयारी भइरहेको छ । तयारी चलिरहँदा पनि विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने नेपाली र विदेशीको संख्या उत्तिकै छ । यसर्थ अहिले पनि भाइरस संक्रमण हुन सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले चीनबाट फर्काइने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गरेर मात्रै नभई अहिलेबाटै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘सरकारले हाल चीनलगायतका संक्रमण देखिएका देशबाट फर्किएका सबैलाई क्वारेनटाइनमा राखेर संक्रमण नभएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र परिवार वा समाजमा घुलमिल गर्न दिनुपर्छ,’ डा. चोखानी भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यअन्तर्गत सम्भावित संक्रमणलाई रोक्ने हालसम्म यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो उपाय हो ।’
टेकु अस्पतालका भाइरोलजिस्ट डा. पाण्डेसमेत चीनलगायत संक्रमण देखिएका मुलुकबाट फर्कनेले दुई सातासम्म आफ्नो परिवारका सदस्यसँग समेत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने गरी घरमै क्वारेन्टाइनमा जस्तै गरी बस्नु उपयुक्त हुने बताए ।
नोवल कोरोना भाइरसबाट संक्रमितलाई मध्यमदेखि कडा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ । जसअन्तर्गत ज्वरो, खोकी, सास फेर्न असजिलोलगायतका लक्षण देखिन्छ । सयमध्ये २० संक्रमितमा कडा रूप देखिने र दुई जनाको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), हेल्थ इमर्जेन्सीका कार्यकारी निर्देशक डा.माइकल रायनले यसै साता गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
नोवल कोरोना भाइरस मौसमी रुघाखोकीजस्तै संक्रमित एक व्यक्तिबाट अर्को स्वस्थ व्यक्तिमा श्वासप्रश्वासको माध्यमले फैलन्छ । मुख्य रूपले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हुने व्यक्तिका साथै मुखबाट निस्किने पानीका स–साना कणका माध्यमले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिरहेको डब्लूएचओ, हेल्थ इमर्जेन्सीका कार्यकारी निर्देशक डा.. माइकल रायन बताउँछन् ।
‘हामीले यो संक्रमण श्वासप्रश्वासका माध्यमबाट प्रसारित भइरहेको पाएका छौं,’ डब्लूएचओ इमर्जेन्सी डिजिज एन्ड जुनोसिसका प्रमुख डा. मारिया वैन केरखोव भन्छिन्, ‘यसैले मुखबाट निस्किने पानीको स–साना थोपा र व्यक्ति–व्यक्तिबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ ।’
खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा निस्किने पानीको स–साना थोपाले भाइरस बोक्छ । डा. केरखोवका अनुसार पानीको थोपाको माध्यमले विभिन्न सतहमा टाँस्सिएका भाइरस केही समयसम्म जीवित रहने हुँदा त्यस्ता सतहलाई छुँदा पनि संक्रमण हुन सक्छ । यद्यपि नोवल कोरोना भाइरस कति समयसम्म सतहमा जीवित रहन सक्छ भन्नेबारे यकिन भने भइसकेको छैन । प्रारम्भिक जानकारीअनुसार भने यो भाइरस खुला सतहमा केही घण्टा मात्रै बाँच्न सक्छ । तर सामान्य संक्रमण मुक्त गर्ने रसायनले सतहमा भएको यो भाइरसलाई मार्न सक्छ ।
कसरी बाँच्ने ?
रुघाखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बच्नका लागि अपनाइने उपाय नै नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन प्रभावकारी छ । संक्रमित व्यक्तिसँग दूरी राख्ने, श्वासप्रश्वास र हातसम्बन्धी स्वच्छताको नियम अपनाउनुलगायतका बचाउका उपाय फाइदाजनक हुने डा. रायन बताउँछन् । यस भाइरसबाट बच्न हालसम्म कुनै पनि औषधि र उपचार विधि पत्ता नलागेकाले सचेत हुनु नै सबैभन्दा उच्चतम उपाय हो ।
ज्वरो आएका, खोक्ने र हाच्छिउँ गरिरहेका मानिससँग एक मिटरको दूरी कायम गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । सम्भावित संक्रमण हुन सक्ने व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा निस्किने पानीका स–साना कणमा भाइरस हुने हुँदा बढी नजिक हुनु भनेको संक्रमण फैलने जोखिम बढाउनु हो । सामान्य व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा हातले मुख छोप्नुको सट्टा कुहिनो वा टिस्यु पेपर उपयोग गरेर त्यसलाई उचित रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ ।
हामीमध्ये धेरैजसोले रुघाखोकी हुँदाताका खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा रुमाल प्रयोग गर्ने र निरन्तर त्यसलाई खल्तीमा राख्ने गरेका छौं । यसले गर्दा रुघाखोकीलगायतका संक्रमण झन् फैलने ओल्याउँदै डा.चोखानी भन्छन्, ‘यस्तो समय टिस्यु पेपरको उपयोग गर्नुहोस् र बारम्बार साबुनपानी वा स्यानिटाइजरले हात धुनुहोस् ।’ बारम्बार साबुनपानीले हात धुँदा कथंकदाचित कुनै प्रक्रियाद्वारा हातमा टाँस्सिएको भाइरस हटाउन प्रभावकारी हुन्छ ।
कति दिनसम्ममा लक्षण देखिन सक्छ ?
नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि शरीरमा लक्षण देखिने समयबारे अध्ययन जारी छ । हालसम्म डब्लूएचओले गरेको आँकलनअनुसार संक्रमणको इन्क्युवेसन पिरियड (भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि लक्षण देखिने समय) एकदेखि १२.५ दिन हो । औसत अनुमान ५–६ दिनसमेत गरिएको छ । थप तथ्यांक आएपछि यो समयबारे झन् सटिक रूपले भन्न सकिन्छ । मर्स र सार्सजस्तै नोवल कोरोना भाइरसको इन्क्युवेसन पिरियड १४ दिनसम्म हुन सक्छ ।
घरपालुवाबाट भाइरस सरेको छैन
विशेषज्ञका अनुसार कुकुर, बिरालो, गिनीपिग, खरायो, चरालगायतका घरपालुवा जनावरबाट नोवेल कोराना भाइरस सरेको हालसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । ‘कुकुरलगायतका घरपालुवा जनावरबाट भाइरस सर्ने हो कि भनेर आत्तिएर कैयौंले सोध्ने गरेका छन्,’ एड्भान्स पेट हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका पशुचिकित्सक डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् । उनका अनुसार घरपालुवा जनावरबाट कोरोना भाइरस मानिसमा सर्न सक्ने अफबाहले गर्दा हाल यस्ता जीवजन्तु मर्कामा परेका छन् । घरपालुवा जनावरका कारण नोवल कोराना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने हालसम्म कुनै प्रमाण नभेटिएको डब्लूएचओले पनि उल्लेख गरेको छ । यद्यपि घरपालुवा जनावर छोइएसकेपछि साबुनपानीले हात धुनु आवश्यक रहेकोमा उसले जोड दिएको छ । यसले ई–कोली, साल्मोनेला आदि सामान्य ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन दिँदैन ।
निमोनियाविरुद्धको खोपले रोकिन्न
गत वर्षको अन्त्यतिर चीनमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरसविरुद्ध हालसम्म कुनै खोप निर्माण भएको छैन । डब्लूएचओका अनुसार निमोनियाविरुद्घको खोप जस्तै ‘निमोकोक्कल भ्याक्सिन’ र ‘हेमोफिलस इन्फलुएन्जा टाइप बी (एचआईबी)’ खोपले कोरोना भाइरसविरुद्घ प्रतिरोधक क्षमता दिँदैन । भाइरसमा प्रभावकारी हुन सक्ने खोप निर्मार्णमा अनुसन्धानकर्ता प्रयासरत छन् ।
लसुन कत्तिको फाइदाजनक छ ?
परापूर्वकालदेखि नै नेपाललगायतका मुलुकमा खाद्यपदार्थ मात्र नभई औषधिको रूपमा समेत उपयोग गरिँदै आइएको छ । स्वस्थकर खाद्यपदार्थ लसुनमा केही ब्याक्टेरियाविरुद्घ लड्न सक्ने गुण हुन्छ । तर डब्लूएचओका अनुसार लसुन सेवन कोरोना भाइरसविरुद्ध उपलब्धिमूलक हुने देखिएको छैन ।
बूढापाकालाई मात्रै प्रभावित गर्छ ?
डब्लूएचओका अनुसार नोवल कोरोना भाइरसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई प्रभावित गर्छ । यसैले सबै उमेर समूहका व्यक्तिले भाइरस संक्रमणबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यद्यपि पाका उमेरका र पहिलेदेखि नै दम, मधुमेह, मुटु रोग लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएकामा यसले चाँडै प्रभाव पार्न सक्छ ।
एन्टिबायोटिक प्रभावकारी छ ?
एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियाविरुद्घ काम गर्छ । भाइरसविरुद्घ यसले काम गर्दैन । तसर्थ नोवल कोरोना भाइरसबाट बच्न वा उपचारका लागि एन्टिबायोटिक उपयोग गर्नु हुँदैन । तर भाइरस संक्रमणले गर्दा अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा चिकित्सकले एन्टिबायोटिक प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
कुनै औषधि छ ?
नोवेल कोरोना भाइरसको हालसम्म खास औषधि पत्ता लागेको छैन । हाल संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ ।
डब्लूएचओका अनुसार केही खास उपचार विधिबारे खोजी भइरहेको छ र यसलाई क्लिनिकल ट्रायलको माध्यमले परीक्षण गरिनेछ ।
मास्कले जोगाउँछ ?
चिकित्सकीय मास्कले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी केही रोग फैलन नदिने भए पनि मास्क लगाउनाले
मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सक्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । मास्क लगाउनुका साथै, नियमित साबुनपानीले हात धुनु, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वच्छता अपनाउनु, शंकास्पद व्यक्तिसँग न्यूनतम एक मिटर टाढा बस्नुलगायतका प्रक्रियाले केहि हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०९:४०